वीर्य स्खलनपछिको यौनसम्पर्कमा गर्भ बस्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं । म २० वर्षीया युवती हुँ । मेरो केटासाथीसँग यौनसम्पर्क भएको थियो । हामीले कन्डम प्रयोग गरेका थियौं र पछि वीर्य स्खलन भैसकेपछि कन्डमबिना यौनसम्पर्क गर्‍यौं, तर अहिले मेरो महिनावारी भएको छैन । महिनावारीको डेट पनि कटिसक्यो । मलाई डर लागिरहेको छ, कतै मेरो गर्भ त बसेन ? वीर्य निस्किसकेर यौनसम्पर्क गर्दा पनि गर्भ बस्छ ? यो विषयमा डा राजेन्द्र भद्रा के भन्छन त ?
अब तपाईंको मूल प्रश्नमा आऔं । तपार्इंले शुक्रकीटको कुरा गर्नुभएको छ, तर लिङ्गबाट निस्कने सेतो पदार्थ नै वीर्य ९कझभल० हो, त्यसैले यसलाई वीर्य स्खलन भनिन्छ । यही वीर्यमै शुक्रकीट ९कउभचm० हुन्छन् । तपाईंले वीर्य स्खलन भैसकेपछि कन्डम फुकाल्नासाथ यौनसम्पर्क गरेको हो कि रु त्यसपछि लिङ्गलाई पानीले पखालियो कि पखालिएन वा त्यसपछिको यौनसम्पर्क तुरुन्तै भएको हो कि केही घण्टापछि भएको हो रु वीर्य स्खलनपछि फेरि यौनसम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेरियो कि फेरिएन रु जस्ता कतिपय कुराका आधारमा गर्भ रहनेरनरहने सम्भावना बढी वा कम हुन सक्छ ।
यौनसम्पर्क राख्ने युवतीमा महिनावारी रोकिनुको मुख्य कारण गर्भ रहनु हो । तपाईंलाई थाहै होला, गर्भ रहेपछि महिलाको शरीरमा केही परिवर्तन आउँछन् । यो परिवर्तनको पहिचान गरेर गर्भ रहेरनरहेको छुट्टयाइन्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने महिनावारी नहुने, स्तन छाम्दा हल्का रूपमा दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, मनोदशामा परिवर्तन, थकाइ लागेजस्तो हुने, खाने बानी वा रुचिमा परिवर्तन तथा छिटोछिटो पिसाब लाग्ने हुन सक्छ । त्यसै गरी पछि स्तन अझै ठूलो हुने, स्तनको मुन्टो गाढा रंगको हुने, योनिबाट सेतो पानी बग्ने, पेट ठूलो हुनुका साथै बच्चा चलेजस्तो लक्षण देखिन्छ । यस्ता लक्षणमध्ये धेरैजसो लक्षण आफूमा भए गर्भ रहेको भन्न सकिने स्थिति हुन्छ, तैपनि कतिपय परिस्थिति शारीरिक जाँच गरेर मात्र गर्भ रहेरनरहेको ९स्पष्ट रूपमा० निर्धारण गरिन्छ । यस्ता लक्षणका आधारमा आफैंले यी कुराको निक्र्यौल गर्न बढी समय पर्खनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा तपाईंका लागि अहिले त्यति उपयुक्त नहोला ।
तपाईंले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा भनेको गर्भ रहे–नरहेको पत्ता लगाउने हो । गर्भ रहेको शंका भए पिसाब परीक्षण गरेरसजिलैसँग गर्भ रहेरनरहेको छुट्टयाउन सकिन्छ । यस किसिमको परीक्षण विधि सजिलो भएकाले धेरैजसो ठाउँमा उपलब्ध छ । तपाईंले आफैंले पिसाब जाँच्न सक्नुहुने ‘कीट’ पनि उपलब्ध हुन्छ ।
अब कुरा आउँछ, गर्भलाई निरन्तरता दिने कि नदिने रु गर्भलाई निरन्तरता दिने हो भने तपाईं र तपाईंको साथीले विवाह गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि घरपरिवारमा सल्लाह गर्नु बेस हुन्छ । गर्भ रहेको स्थितिमा त्यसलाई निरन्तरता नदिने हो भने त्यसका लागि पनि केही उपाय छन् । औषधी खाएर वा औजारको प्रयोगबाट यसो गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृतिप्राप्त व्यक्ति तथा केन्द्रमा सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
नेकपाका ५ युवा नेताद्वारा १० क्विन्टल चामल हस्तान्तरण